Hogaamiye kooxeed ka cawday in gudiga farsamada. - Xusuus
Saturday, 18 August, 2012 I Latest Update 12:23 am Home
Hogaamiye kooxeed ka cawday in gudiga farsamada.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Xaabsade oo ka mid ahaa magacyada xubno dhawaan ay guddiga xulista xidlhibaannadu dib u soo celiyeen ayaa iska fogeeyay inuu ka mid yahay hoggaamiye kooxeedyada Soomaaliya.
Mudane Xaabsade oo la hadlayay VOA-da ayaa sheegay in sababta loo soo celiyay uusan weli garan, isagoo sheegay inaysan jirin dacwad dambi ku caddeysay sidoo kalena uusan ogeyn halka laga keenay warkan.
“Aniga hoggaamiye kooxeed ma ihi, soo celinta magacaygana waxaan u arkaan inay tahay isbaaro loo dhigtay beelaha Soomaaliyeed,” ayuu yiri Xaabsade isagoo xusay in beelaha uu kasoo jeedo ee digil iyo mirifle aysan lahayn hoggaamiye kooxeed oo ay ahaayeen beelo iska difaacayay beelo kusoo duulay, balse aysan iyagu duulaan ahayn.
Mar la weydiiiyay su’aal ahayd inay saameyn ku yeelan karto soo celinta magaciisa ay soo celiyeen guddiga xulista baarlamaanka ayuu sheegay inaysan saameyn ku yeelanayn, sidoo kalena aysan wax cabsi ah gelinayn.
“Khaladaadkii Soomaaliya ka dhacay waxaa looga heshiiyay shirkii Embagathi, aniga maxkamad wax iguma soo caddeyn – shuruudaha Roadmap-ka waxaa ka mid ahaa in qofkii aan dambi gelin shan sano uu ka mid noqonayo baarlamaanka, anigana lix sano ayaan Imbegathi kaddib ahaa wasiir,” ayuu yiri Xaabsade.
Ugu dabeyn, Xaabsade wuxuu guddiga xulista xildhibaannada baarlamaanka ku eedeeyay inay iyagu wataan in dib ay u soo celiyaan magacyada, isagoo sheegay inaysan arrintaan DKMG ah iyo Qaramada Midoobay aysan waxba ka ogeyn.
Guddiga xulista xildhibaanada baalamaanka baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa waxay dhawaanahan dib u celinayeen magacyada xubnaha looga shakisan yahay inay dambiyo dagaal galeen iyo xubno kale oo qaarkood lagu celiyay aqoon-darro.
Allaha u naxariisto Marxuum Axmed M. Gdafeey oo maanta Katrineholm lagu aasay. Madaxweyne Shariif iyo Mahiga oo isku mowqif noqday. Categories
xusuus Add a Comment on "Hogaamiye kooxeed ka cawday in gudiga farsamada."